12:40 PM အရာရာ
ဘော်လုံးပွဲစဖို့အချိန်ကလည်းနီးနေပြီ ၊ အသင်းသားတွေကလည်းမဆုံသေး……. နောက်(၅) မိနစ်လောက်ဆို ရင် ပြိုင်ပွဲကစတော့မှာမို့ မရောက်လာနိုင်သေးတဲ့ အသင်းသားတချို့ကို စောင့်မျှော်နေရတဲ့ အသင်းခေါင်ဆောင် ကျွန်တော့်အဖို့ တော်တော် စိတ်လုပ်ရှားနေမိသည်။ ဒီပွဲကို နိုင်မှဖြစ်မည် နိုင်မှလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီပွဲဟာ တကယ့်ကျွန်တော်တို့ အသင်းအတွက် တကယ့်ကိုအရေးကြီးဆုံးပွဲဖြစ်သလို တဘက်အသင်းအတွက် လည်း အင်မတန်မှ အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း နှစ်ဘက် ပရိသတ်အသိဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့လည်းအသိဖြစ်ပါ သည်။ကျွန်တော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ရပ်ကွက်အသင်းက ရပ်ကွက် (၁၇) ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့နယ်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ အနိုင်နှင့်
(၅) မိနစ်ကျော်သွားပါပြီး ကျွတော်တို့ အသင်းသားတချို့ရောက် မလားသေးပါ၊ ဘောလုံးစည်းကမ်းအတိုင်း (၁၅) မိနစ် ထက်စောင့်ပေးမည်ဟု ဒိုင်လူကြီးကကျွန်တော့်ကိုပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရောက်မလာသေးလဲ ဆိုတာကို သိချင်တော့ ဖုန်းဆက်ကြည့်သည် တယောက်မှ ဖုန်းမကိုင်ကြပါ…..။ ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို စိတ်လုပ် ရှားနေပါပြီ၊ စိတ်လည်းအနည်းငယ်တိုနေပါပြီး၊ စထွက်လာတုန်းက ကား(၂) စီးဖြင့် အတူတူလာခဲ့တာ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ရောက်လာပြီး ကျန်ကားတစီးကမရောက်လာသေးရပါသလဲ……. တွေးနေတုန်း ကားက ကျွန်တော် တို့နာရာ နေရာသို့ရောလာခဲ့ပါသည်။ ရောက်လာတော့ ဘာလို့နောက်ကျလဲလို့မေးတော့ ကားဘီးပေါက်သွားလို့ အစ်ကိုတဲ့ … သူတို့ကို စကားပြောဖို့အချိန်က သိမ့်မရတော့လို့ ကွင်းထဲဆင်းဖို့ ကျွန်တော်ကလိုက်အော်ပြော တော့ အားလုံးက ကွင်းထဲဆင်းတန်းစီပြီး နှစ်ဘက် ပရိသတ်ကို အရိုအသေပြုပြီးတာနဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ “ဝေစီ(ခရာ)” သံထွက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက် (၁၁) အသင်းနှင့် တဘက်အသင်း ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ ပထမပိုင်းပြီး သည်အထိ တဘက်နှင့်တဘက် ဂိုးမသွင်းနိုင်းကြသေးပါ……။
(၁၅) မိနစ် နားချိန်မှာ ကျွန်တော်က နိုင်အောင်ကစားဖို့ လိုက်ပြောရပြန်သည်….. ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက် သားများက လည်း အားပေးကြပါသည် …… အဲ့ဒီအထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားအသံတခုကတော့ “ ဟေ့ညီလေး အာရာရာ မင်းနိုင်အောင် ကန်နော် နိုင်အောင်မကန်ရင် မင်းငါ့ညီမနဲ့ဝေပြီသာမှတ်” အမေးလေး ဘယ်ကအသံတုန်း ၊ အသံလာရာကို လှမ်းကြည့်မိ တော့ မတော်ရေသေးတဲ့ ယောက်ဖဖြစ်နေတယ်…..။ ကျွန်တော်က ယောက်ဖကို လက်မ လေးထောင်ပြလိုက်တယ်….။ နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့……။
ဒုတိယပိုင်းလည်းစပါပြီး ၊ နှစ်သင်းလုံး သူ့ရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်ရပ်ကွက်အနိုင်ရဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ နှစ်သင်းစလုံး ဂိုမသွင်းနိုင်းသေးပါ၊ ပွဲပြီးခါနီး အချိန်အနည်းငယ်မှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းက (ကော်နာ) ကတဆင့် ကန်လိုက်တဲ့ဘော်လုံး ကို ကျွန်တော်က ခေါင်းခုန်တိုက်လိုက်တာ အရှိန်က နည်းနည်းပြင်းတယ်နဲ့တူတယ်ထင်တယ် “ဂိုး” ဆိုတဲ့အသံတွေနဲ့ အတူ လက်ခုပ်သံ တွေလည်း လည်းကြားရော ကျွန်တော်က “ဂိုး”သွင်းပြီးတိုင်း နောက်ကျွမ်း ပစ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုတော့….. ထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျွမ်းပစ်လိုက်တာ အိပ်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့ လန့်နိုးသွားတာပဲ…. နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်သွားလဲမသိတော့ဘူး”
ယေက်ဖရေ “ဂိုး” တော့သွင်းနိုင်ခဲ့ပါရဲ့ ယောက်ဖရဲ့ညီမကို မရပဲ ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ ခါးနာတာပဲရ လိုက်တယ် ဗျား…..၊။